Imandarmedia.com.np: सावधान ! काठमाडौंमा फेरि स्वाइन फ्लू देखियो, सचेत रहन चिकित्सकहरुको चेतावनी
Big News, News » सावधान ! काठमाडौंमा फेरि स्वाइन फ्लू देखियो, सचेत रहन चिकित्सकहरुको चेतावनी
काठमाडौंमा फेरि स्वाइन फ्लू भेटिएको छ । कुलेश्वरकी ३८ वर्षीया महिलाको रगतमा स्वाइन फ्लूको एच् वान् एन् वान् भाइरस भेटिएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् ।
२०७४ असार १३ मा प्रकाशित ।